volunteering | SASCA Manchester
Dhalinta ayaa keeni karta isbadalka bulsha
June 9, 2015 dave porter Somali language version stories	Africa, community, Manchester, News, sasca, Somali, Somalia, volunteering
“Waxaan ku dhashay dalka Soomaaliya ka dibna anigoo 12 jir ah ayaan imid England. Maadaama aananu meel qudha ku nagaanin waxan soo dhigtay saddex dugsi oo kala duwan oo uu ku jiro mid London ahaa.
Waxaanu ahayn dadka qudha ee ajnebiga ah ee ku nool xaafada Openshaw ee magaalada Manchester, kumana aan haysan asxaab Soomaali ah, sidaa darteed waxaan ku qasbanaa inaan barto luuqada ingliishka, saddex bilood gudahood waxaan bartay inaan sharaxaad ka bixin karo naftayda.
” sidaa waxa tidhi; Ubax maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Manchester oo uu waraysi la yeeshay wargayska Sascanews. Ubax oo hadda jaamacada Salford ka barata culuunta kalkaalisanimo ee dhinaca carruurta iyo dayarta ah ayaa iyadoo ka waramaysa hamigeeda mustaqbalka waxa ay tidhi; “Waxaan doonayaa inaan wax fiican uga tagno jiilka oo ay wax qiimaleh inaga dhaxlaan”
Ubax oo ka waramaysa sida ay u aragto ururka Sasca oo ay mudo la shaqaynaysay, ayaa tidhi; ‘‘Ku dhawaad labbo sanno ayaan ururka Sasca kula shaqaynayey si tabaruc ah, mashruucayagii u
horeeyeyna waxa uu ahaa xog-ururin loogu magacdiray Rajada Mustaqbalka. Waxaan halkaa kula kulmay howlwadeenada Sasca oo daryeelaya bulshadooda.”
Waxayna intaa raacisay oo tidhi; “aragtidayda, ururka Sasca waxa uu u jiraa inuu taageero bulshada ku dhibasataysan dadka shaqo la’aan iyo arrimaha kale. Laga bilaabo Isniinta ilaa
Jimcaha, waxaa had iyo jeer aad ka helaysaa qof ku caawiya. Shaqo qiimo leh ayey hayaan, taasina waa ta igu dhalisay inaan sii joogo oo aan wax badan la qabto.
Waxaanan filayaa bulshada oo dhami inay mid noqondoonto oo ay wax wada qabsandoonto. ”
Ubax oo gabogabadii ka waramaysa qorshaheeda mustaqbalka, ayaa tidhi; “Marka ay timaado mustaqbalka, waxaan rabaa in aan sameeyo isbadal, haddii ay tahay dhinaca daryeelka caafimaadka
ama bulshadaba. Ujeedadaydu waa marka aad adigu isbadalka keenikarto waa inaanad sugin in qof kale sameeyo. Dhamaantayn waynu wada hamiyi karnaa laakiin waxay tahay in aynu ka shqayno himildeena.
Macalinkayga ayaa yidhaa; ‘haddii aad u malaynayso in aad samayn karto isbedel, waa maxay sababta aad bari u sugaysaa barri, samee maanta’. Waxaa jira caqabado badan oo dayarta hortaagan
waanay fududahay in la niyad-jabo, laakiin haddii aad hesho dad ku aaminsan oo ku taageera, waxa ay noqonaysaa mid sahal ah”